सभापति देउवा निवासमा नेविसंघको धर्ना
नेपाल पाना प्रकाशित: २०७५-१०-३ गते
काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा नेविसंघभित्रको असन्तुष्ट समूहले धर्ना दिएका छन्। नैनसिंह महर नेतृत्वको नेपाल विद्यार्थी संघको कार्यकाल सकिए पनि तेस्रो पटक पार्टीले म्याद थपेको भन्दै असन्तुष्ट समूहले धर्ना दिएका हुन् ।
बिहिबार बिहान नेविसंघ काठमाडौंको आयोजनामा मोटरसाइकल र्याली गर्दै उनीहरू देउवा निवास बूढानिलकण्ठ पुगेका थिए। सभापति महरले १२ औं महाधिवेशन गर्न नसक्ने भएकोले म्याद थपको औचित्य नहुने नेविसंघ काठमाडौं सभापति मनोज वैद्यले बताए।
धर्नाको नेतृत्व गरेका नेविसंघ काठमाडौं सभापति मनोज वैद्यले महर नेतृत्वको कार्यसमितिले महाधिवेशन गर्न नसक्ने भएकोले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न दबाब दिन सभापति देउवालाई भेटेको बताए। ‘नेविसंघको अहिलेको नेतृत्वले महाधिवेशन गराउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘पार्टीले म्याद थपिरहनु हुँदैन।’
भदौ २ मा कार्यकाल सकिए पनि पहिले ३ महिना र पछि दुई महिना नेविसंघको म्याद थपिएको थियो। बुधबार फेरि माघ १० सम्म यही कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय कांग्रेसले गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह समूहका नेविसंघका असन्तुष्ट समूहले सभापति देउवालाई भेटेका हुन्।
सभापति महरले महाधिवेशन गर्न नसक्ने बताउँदै उपसभापति, महामन्त्री लगायत ५० भन्दा बढी सदस्यले राजीनामा गरिसकेका छन्। नेविसंघ १६५ सदस्यीय छ। पुस २८ देखि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजानिक गरे पनि १६ जिल्लामा मात्रै अधिवेशन सकेको र महाधिवेशनको वातावरण तयार नगरेको भन्दै नेविसंघभित्रै नेतृत्वको कार्यक्षमतालाई लिएर विरोध भइरहेको छ।
काठमाडौं । नेकपानिकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार गृहकार्य नपुगेको भन्दै नेकपाको आज तीन बजे बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। आजको बैठकले केन्द्रीय आयोगहरू..
सरकारविरुद्ध कुनै पनि बेला आन्दोलनमा आउन सक्छु: सभापति देउवा
बुटवल । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारविरुद्ध आफ्नो पार्टी कुनै पनि बेला सडक आन्दोलनमा आउन सक्ने बताएका छन् । उनले केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण..
नेकपाको सरकार पाँच वर्षसम्मै रहने तर नेतृत्व कसको ?
काठमाडौँ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘समझदारी’ अनुसार चल्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा द..
सत्तारुढ (ने.क.पा.) मा फेरि एक्लिए माधव नेपाल, वरियताक्रममा झलनाथ भन्दा पनि तल
काठमाडौं । सत्तारुढ (ने.क.पा.) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टीभित्र फेरि च्यापिएका छन् । आइतबार साँझ बसेको (ने.क.पा.) सचिवालय बैठकले नेपालको बरियता खोस्दै झलनाथ खनालल..